Madaxweynaha Puntland oo Yaasiin Cabdisamad u magacaabay duqa kumeelgaarka ee Gaalkacyo kadib markii uu kala diray golihii deegaanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo Yaasiin Cabdisamad u magacaabay duqa kumeelgaarka ee Gaalkacyo kadib markii uu kala diray golihii deegaanka
Duqa kumeelgaarka ee Gaalkacyo Yaasiin Cabdisamad. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kala diray golihii deegaanka magaalada Gaalkacyo, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxtooyada maanta oo Sabti ah.
Digreetada ayaa lagu sheegay in golaha deegaanka ay hanan-waayeen shaqadii loo idmaday sidaasna madaxweynuhu ku kala diray.
Madaxweynaha ayaa Yaasiin Cabdisamad u magacaabay duqa kumeelgaarka ah ee Gaalkacyo halka Cabdinaasir Cigaal Xirsi loo doortay ku xigeenka duqa , sida lagu sheegay digreetada.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah tagay magaalo xeebeedka Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, sida ilo-wareedyo katirsan dowladda ay u xaqiijiyeen Puntland Mirror. Cabdiweli oo wariyeyaasha la hadlay [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashada xubnaha aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah dib uga bilaabmatay magaalada Garoowe ee caasimada dowladda Puntland. Doorashada maanta ayaa waxaa lagu dooran doonaa saddex xildhibaan, kuwaasoo kamid [...]